आषाढ़ २६ गते, २०७३ आइतवार
10th July, 2016 Sun १३:३८:३१ मा प्रकाशित
महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती हो कि राष्ट्रवादी ? त्यसबाट नेपालले के पायो ? कति लाभ लियो र गुमायो ? यो फेरि चर्चा गरिरहनुपर्ने विषय होइन । सन्धि राष्ट्रघाती थियो । यो सन्धिका प्रवर्तक अहिलेका ‘राष्ट्रवादी’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए ।
महाकाली सन्धिको पक्षमा सबैभन्दा ठूलो ‘त्याग’ कसैले गरेको थियो भने अहिलेको एमालेले गरेको थियो । बामदेव गौतमले यही सन्धिलाई आधार बनाएर पार्टी फुटाए । ओली तिनै हुन्, जो भन्थे–महाकाली सन्धिबाट नेपाललाई १ खर्ब २० अर्ब वार्षिक आम्दानी हुन्छ । नेपाली राजनीति अचम्मको छ–नेताले बोलेको पुष्टी फेरि कहिल्यै गर्नुपर्दैन । बोल्दै जाने हो, भन्दै जाने हो । सपना बाँडिरहने हो । जनता ढिलो हिसाब गर्छ–छिटो विश्वास गर्छ । रोचक कुरा–ओलीले महाकालीको आम्दानीबारे फेरि कहिल्यै बोलेनन् । अझ भनौं, उनलाई बोल्नुपरेन । उतिबेलाका ‘राष्ट्रघाती’ ओली अहिलेका चर्का ‘राष्ट्रवादी’ हुन् । राष्ट्रवादको श्रीपेच टाउकोमा गुथेपछि यिनले जनताको अनगिन्ती माया पाए । ओली रातारात राष्ट्रवादी भए । ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नु थियो । त्यो प्रधानमन्त्रीको लालसामा ओलीले संविधान जारी गर्न जिरह गरे । उनलाई गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा संघीयताजस्ता परिवर्तनका एजेण्डामा मुलुकलाई जर्वजस्त हिडाउँने प्रचण्डको साथ थियो । प्रचण्डको संविधान जारी गरेर भएका उपलब्धि जोगाउने स्वार्थ थियो । ‘प्रधानमन्त्री बन्ने’ र ‘उपलब्धि जोगाउने’ स्वार्थबीच तालमेल मिल्दा उनीहरुले संविधानको खिलापमा रहेको भारतीय संस्थापनलाई चुनौति दिए । बस, यहिँबाट ओली ‘राष्ट्रवादी’ भए । [caption id="attachment_82352" align="alignleft" width="250"] लेखक[/caption] ओली यसअघि राष्ट्रवादी भएको यो पंक्तिकारलाई जानकारी छैन । यसपछि के होलान् ? अहिल्यै भन्न सकिन्न । कोशी, गण्डक र महाकाली सन्धिजस्ता राष्ट्रघाती सन्धिका विपक्षमा ओली कहिल्यै बोलेनन् । भारतीय सुरक्षाबल नेपालको भूगोलमा पसेर दिनहूँजसो हाम्रो राष्ट्रवादलाई चुनौति दिँदा ओली उग्राइरहे । कालापानी र सुस्तामा भारतीय विस्तारवादले फौजी क्याम्प खडा गरेर बस्दा यिनको राष्ट्रवाद कता थियो ? त्यो पनि थाहा पाइएन । देशको सीमा हजारौं स्थानमा मिचिएका छन्–ओली बेखबर जस्तै छन् । अचम्म–ओली यस्तै भएपनि राष्ट्रवादी भएका छन् ।
ओली पछिल्लो समय परिवर्तनको पक्षमा कहिल्यै उभिएनन् । यिनले जाँगर लाएर ०६२/०६३ को आन्दोलनमा भाग समेत लिएनन् । बरु आन्दोलनलाई उल्टो खिसिट्युरी गरे– ‘आन्दोलनको सफलता भनेको ठेलागाढा चढेर अमेरिका जानु जस्तै हो’ । यिनलाई गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयताजस्ता परिवर्तन कहिल्यै मन परेन । ठोसमा भन्दा ०६२/०६३ पछिको परिवर्तनमा ओलीको कुनै सकारात्मक भूमिका रहेन र यो परिवर्तित अग्रगमनमा ओलीको उदाशिनताबाहेक कुनै देन छैन । ओलीले गए शुक्रबारमात्रै काभ्रे पुगेर घुमाउरो भाषामा संघीयताको विरोध गरे । संविधान कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारी जिम्मेवारी पाएका ओलीले ‘संघीयता लागू गर्न खोजे जनताले खारेज गर्ने’ भनेर आफ्नो असली नियत बोले भन्दा अतियुक्ति हुँदैन । यो अभिव्यक्ति ओलीको अन्तरमन थियो । यो टिप्पणी ‘ओली गफ र राष्ट्रवाद’ मा मदहोश भएका एमालेजनप्रति हो । ओली प्रधानमन्त्री भएपछि के गरे ? समीक्षा गरौं – प्रधानमन्त्री भईसकेपछि ओलीका मुख्य तीन जिम्मेवारी थिए । नयाँ संविधानको क्रार्यान्वयन, भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनःनिर्माण तथा राहत र संविधानमा असहमत मुख्यतः मधेसी मोर्चा तथा अन्यलाई सहमतिमा ल्याउँदै संविधान क्रार्यान्वयनको थालनी गर्नु । ओली यी ३ मुख्य जिम्मेवारीमा असफल मात्रै छैनन् पुर्णतः उदाशिन छन् । ओली अहिलेका यी तात्कालिन एजेण्डा र मुख्य जिम्मेवारीबाट भागिरहेका छन् । हो, यहीँनेर ओलीको परिवर्तनप्रतिको उदाशिनता र स्वार्थमा केन्द्रित ‘ओली राष्ट्रवाद’काबीच प्रश्न खडा हुन्छ ।
हो, केही काम भए । निरपेक्ष गाली गर्नुहुँदैन । अरु प्रधानमन्त्रीले जस्तै ओलीले पनि बजेटमा केही नयाँ कुरा ल्याएका छन् । चीनसँग पारवहन सम्झौता भयो । पोखरा एयरपोर्ट निर्माण शुरु भयो । केरुङ, काठमाडौं, पोखरा, लुम्बिनी रेलको एजेण्डा हाम्रो होइन–चीनको हो । पारवहन र पोखरा एयरपोर्ट यसअघिका सरकारबाट पहल भएको र ओलीको पालामा सम्झौता भएको विषय हो–नयाँ होइन । तर नराम्रो होइन । पुरानो एउटा उखान छ–‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ । ओलीमा यही उखान लागू हुन्छ । उनी मुख्य काम र जिम्मेवारी छाडेर सपनाको कुम्लो बोकेर सोझा जनतालाई भ्रम बाँड्न माहिर छन् । ओली जनता हाँसेको या रोएको पत्तो पाउँदैनन् ।
माथि उल्लेखित तीन जिम्मेवारी बेलैमा पूरा नगर्दा मुलुक कहाँ पुग्छ ? मुलुक असफल हुन्छ । संविधान क्रार्यान्वयन नहुँदा नयाँ संविधानको औचित्य संविधान त सकिन्छ । पुनःनिर्माण बेलैमा नहुँदा लाखौं घरवारविहिनहरुले अत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भन्नेप्रति ओली बेखबर छन् या उदाशिन ? ओलीले सपना देख्न पाउँदैनन्–हामीले यसो भन्नु हुँदैन । ओलीले सपना नबाँडुन्–यो पनि हामी ठान्दैनौं । तर संक्रमणकालमा रहेको मुलुकको एक कार्यकारीलाई गफाडी बन्ने छुट छैन । उनले प्रधानमन्त्री भएपछि लगाएका सात गफले हामी नेपालीलाई रुन्चे हाँसो लगाउँछ । उनका गफ सुन्दा कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने उनी रातभरी सपना होइन, ‘गफ’ लगाउने तानाबाना बुन्छन् र बिहान उठेर कण्ठ गर्छन् । सोही गफ दिनभरी हामी जनतालाई भट्याउँछन् । नत्र कार्यकारीको सपना मुलुकको आर्थिक अवस्थासँग मिल्दो हुनुपर्ने हो । उनले मुलुकको आर्थिक वृद्धिको आँकडा लिँदा हुन् र आफ्नो भनाईसँग दाँज्दा हुन् । उनले यसो गरेको पाइएन । सपना, विपना या सोचाईँको प्रतिबिम्वन हो । यसकारण एमालेजन भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्यो –यो सपना होइन, ओली गफ हो । गफाडीसँग मुलुक विकासको कुनै साइनो हुँदैन । भूकम्पले घरको जरो उखेलेको छ । पीडितलाई टिनको टहरो चाहियो । टहरो बनाउन उदाशिन ओली पानीजहाज किन्ने भन्छन् । हामी सस्तो या महंगो, पेट्रोलपम्पमा तेल नपाएर साधन थन्क्याउन नपरे हुन्थ्यो भन्छौं, ओली चाँही २ वर्षमा तेलको खानी चलाउँछु भन्छन् । भान्सामा एक सिलिण्डर ग्याँस चाहिएको छ–ओली घरघरमा ग्याँस पाइप जोड्छु भनेर हाम्रो भान्सामा ‘खुनको आँशु’ को बहार गराउँछन् । वर्षामा राजधानीको सडकमा हाम्रा सवारी साधन नडुबे र बटुवालाई हिलाम्य नबनाए हुन्थ्यो, जे छ त्यसमा जाममा नपरी यात्रा गर्नुपाए हुन्थ्यो–ओलीको मेट्रो बस कहिले चढ्नु ? हावाबाट आउने बिजुली एक वर्षमा छेलोखेलो चाहिएको छैन–लोडसेडिङको तालिका अनुसारै सहि, बत्ति आए हुन्थ्यो । उनी पहाड भित्ताका तुइन विस्थापनका कुरा गर्छन्–काठमाडौंका सडकमा तुइन हाल्न नपरे हुन्थ्यो । आर्थिक पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीका अनुसार हामी वार्षिक २५ अर्बको त धानमात्र किनेर खान्छौं, दलहनसमेत जोडदा यो ४५ अर्ब पुग्छ । ५ अर्बको खानेतेल, ८ अर्बको तरकारी, १५ खर्बको मासु, ६ अर्बको फलफूल, २ अर्बको माछा, १ अर्बको चिया, २ अर्बको सूर्ती, ५ अर्बको पामआयल, ४ अर्बको भटमासको तेल, १ अर्बको नरिवलको तेल, १ अर्बको पाउडर दूध, १.५ अर्बको अदुवा–लसुन, २.५ अर्बको अन्य मसला आयात हुन्छ । यो तथ्यांक ओलीलाई थाहा छ कि छैन ? यी आयात गरिने वस्तु नेपालमै उत्पादन हुन सक्छन् र ओलीले भनेको समयसिमामै हुन्छ । तर ओली यसबारे बेखबर जस्तै छन् ।
ओली भन्छन्–सरकार ढाले पाप लाग्छ । हामीलाई हाँसो उठ्छ । किन लाग्ने हो पाप ? के हामीले देखेको मुलुक निर्माण र सम्बृद्धिको सपना बलिदान दिएर सिहंदरबारबाट ‘ओली गफ’ सुनिदिइरहनुपर्ने हो ?
एमालेजनले यो ओलीको गफ होइन, सपना हो भन्लान् । हो, यो सपना पनि हो तर ओलीको यो सपना होइन–गफ हो । मुलुकको कार्यकारीले बाड्ने सपना हाम्रो आर्थिक विकासको अवस्था र सम्भाव्यतामा आधारित हुन्छ । आर्थिक विकासको सम्भाव्यता र अवस्थासँग नजोडिएको सपना केबल ‘मुकुन्दे गफ’ हो (केही समयअघि रत्नपार्कमा बस्ने मुकुन्दे नामको एक गफाडी) । ओलीलाई यो मुकुन्दे गफ गर्ने छुट छैन । म अर्थ व्यवस्थाबारे खास जान्दिन र धेरथोर ज्ञान भएको विद्यार्थी समेत होइन । ज्ञाताहरुको आँकडा विश्लेषण हेर्दा अहिले हाम्रो मुलुक आर्थिक कोणबाट व्यवहारतः असफल राष्ट्रमा गनिन्छ । ओली राष्ट्रको यो अवस्थाप्रति चिन्तित थिए भने असफल राष्ट्रका रुपमा घोषणा मात्रै नभएको मुलुकको अर्थ अवस्था सुधार्न पहल गर्नुपर्ने हो । एमालेजन भन्दैछन् –‘ओली महान हुन् । ओलीले उत्पातै गरे । ओलीलाई काम गर्न नदिने षड्यन्त्र हुँदैछ ।’ ओली के भएर महान भएका हुन् ? ओलीले के गरे ? १,२,३ गरेर बुँदामा ओलीले यो, यो गरे भन्ने कुनै काम गरेको प्रमाण छ ? ओलीले के राम्रो कामको के सुरुवात गरेका छन् र उनलाई काम गर्न नदिने षड्यन्त्र भइरहेको छ ? कम्तीमा हामी र अरुलाई भ्रममा राख्न प्रयत्न गरेपनि एमालेजन आफै भने भ्रममा पर्नु हुँदैन । नत्र भोलिको तपाईँहरुकै पुस्ताले ओलीबारे सोधेको प्रश्नमा तपाईँहरु नाजवाफ बन्नुपर्छ । हाम्रो समाजमा कोही अल्पआयुमै बित्यो भने ‘राम्रो मान्छे थियो, भगवानलाई उ राम्रो लागेर लगे’ भन्ने धार्मिक अन्धविश्वासको चरम अभिव्यक्ति यदाकदा सुन्न पाइन्छ । मान्छे मर्नु राम्रो होइन र पनि राम्रो ठानेजस्तो गर्ने यो मानिसको भगवानप्रतिको अन्धभक्ति हो । एमालेजनले ओलीप्रति यस्तै अन्धभक्ति राख्छन् भने भन्नु केही छैन । ओली भन्छन्–सरकार ढाले पाप लाग्छ । हामीलाई हाँसो उठ्छ । किन लाग्ने हो पाप ? के हामीले देखेको मुलुक निर्माण र सम्बृद्धिको सपना बलिदान दिएर सिहंदरबारबाट ‘ओली गफ’ सुनिदिइरहनुपर्ने हो ?